I-Backlink: Inkcazo, isikhokelo, kunye neengozi | Martech Zone
I-backlink: inkcazo, isikhokelo kunye nobungozi
NgeCawa, ngoSeptemba 20, 2015 NgoMvulo, Septemba 21, 2015 Douglas Karr
Ukunyaniseka, xa ndisiva umntu ekhankanya igama backlink njengenxalenye yesicwangciso sisonke ndihlala ndisoyika. Ndiza kucacisa ukuba kutheni ngale post kodwa ndifuna ukuqala ngembali ethile. Ngexesha elinye, iinjini zokukhangela ezazisetyenziselwa ukuba zibe ziirejista ezinkulu ezazenziwe ngokukodwa kwaye za-odolwa kufana nesikhombisi. I-Google's Pagerank Algorithm itshintshe indawo yokukhangela kuba basebenzise amakhonkco njengobunzima bokubaluleka.
Ikhonkco eliqhelekileyo libukeka ngoluhlobo:
Igama elingundoqo okanye ibinzana
I-hyperlink engenayo evela kwisizinda esinye okanye kwisizinda esingezantsi kwisizinda sakho okanye kwidilesi ethile yewebhu.
Umzekelo: Iindawo ezimbini zinqwenela ukubeka elona gama liphambili. Ukuba iSiza A sasinamalinki ali-100 asalatha ngaso ngegama elingumqolo kwisicatshulwa se-anchor backlink, kwaye iSayithi B yayinamalinki angama-50 akhomba kuyo, iSiza A sinokuma ngaphezulu. Ngesixa sabantu abaguquka kwiinjini zokukhangela, unokucinga nje ukuba kwenzeka ntoni emva koko. Umzi mveliso oziibhiliyoni ezi-5 zeedola uqhushumile kwaye iiarhente ezininzi ze-SEO zavula ivenkile. Iziza ezikwi-Intanethi ezihlalutye amakhonkco zaqala ukufumana amanqaku kwimimandla, zibonelela ngeengcali zeinjini yokukhangela kunye nesitshixo sokuchonga iisayithi ezifanelekileyo zonxibelelwano ukuze zifumane abathengi babo babone ngcono.
Ewe, ihammer yawa njengoko uGoogle wakhupha ialgorithm emva kwealgorithm ukuthintela umdlalo wenqanaba ngokuveliswa kwe-backlink. Ixesha elingaphezulu, uGoogle ukwazile nokuchonga iinkampani ngezona ziphethe gadalala zangasemva kwaye bazingcwaba kwiinjini zokukhangela. Omnye umzekelo opapashwe kakhulu nguJC Penney, owayeqeshe iarhente ye-SEO eyayikho ukuvelisa i-backlinks ukwakha indawo yabo.
Ngoku ii-backlinks zinobunzima ngokusekwe kukufaneleka kwesiza kwindibaniselwano yamagama aphambili. Kwaye ukuvelisa itoni yezixhumanisi ezinomthunzi kwiindawo ezingenagunya ngoku kungonakalisa idomain yakho kunokuba uyincede. Ngelishwa, kusekho iingcali zeNjini yokuKhangela kunye neeArhente ezijolise kwi-backlinks njengeyeza kunyango lwabathengi babo.
Ayizizo zonke ii-Backlinks ezenziweyo zilinganayo
I-backlinks inokuba negama elahlukileyo (uphawu, imveliso okanye umntu), indawo, kunye negama eliphambili elinxulunyaniswa nayo (okanye indibaniselwano yayo). Kwaye i-domain edibanisa nayo inokubaluleka kwegama, indawo okanye igama elingundoqo. Ukuba uyinkampani esekwe esixekweni kwaye yaziwa ngaphakathi kweso sixeko (nge-backlinks), unokukwizinga eliphezulu kweso sixeko kodwa hayi abanye. Ukuba indawo yakho ifanelekile kwigama lophawu, ewe, kunokwenzeka ukuba ubekwiqondo eliphezulu kumagama aphambili adityaniswe nophawu.
Xa sihlalutya uluhlu lokukhangela kunye namagama aphambili anxulumene nabaxumi bethu, sihlala sibhengeza nayiphi na indibaniselwano yamagama egama elinophawu kunye nokugxila kwizihloko nakwiindawo ukubona ukuba abathengi bethu bakhula njani kubukho babo. Ngapha koko, ayinakuba yinto yokucinga ukuba ii-algorithms zokukhangela zibeka indawo ngaphandle kwendawo okanye uphawu ... kodwa ngenxa yokuba imimandla enxibelelene nabo inokubaluleka kunye negunya kwiimveliso ezithile okanye indawo.
Umxholo: Ngaphandle kwe-Backlink
Ngaba kunyanzelekile ukuba ibe yinto yokubuyela umva emzimbeni kwakhona? Citations banokuba bekhula kubunzima babo kwiinjini zokukhangela kwi-algorithms. Isicatshulwa kukukhankanywa kwegama elikhethekileyo ngaphakathi kwinqaku okanye ngaphakathi komfanekiso okanye ividiyo. Isicatshulwa ngumntu owahlukileyo, indawo okanye into. Ukuba DK New Media ikhankanyiwe kwenye indawo kodwa umxholo ngu urhwebo, kutheni le nto injini yokukhangela ingenakulinganisa ukukhankanywa kunye nokonyusa inqanaba lamanqaku kwi DK New Media enxulumene nentengiso.
Kukwakho nomxholo womxholo okufuphi nekhonkco. Ngaba idomeyini ekhomba indawo yakho okanye idilesi yewebhu inokubaluleka kwesihloko onqwenela ukusihlela? Ngaba iphepha eline-backlink ekhomba kwisizinda sakho okanye kwidilesi yewebhu efanelekileyo kwesihloko? Ukuvavanya oku, iinjini zokukhangela kufuneka zijonge ngaphaya kokubhaliweyo kwisicatshulwa se-anchor kwaye zihlalutye wonke umxholo wephepha kunye negunya ledomain.
Ndiyakholelwa ukuba ii-algorithms zisebenzisa esi sicwangciso.
Umbhali: Ukufa okanye ukuzalwa kwakhona
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, uGoogle wakhupha umda ovumela ababhali ukuba babophe iisayithi ababhale kuzo kunye nomxholo abawukhuphile wabuyela kwigama labo nakwinkangeleko yoluntu. Le yayiyinkqubela phambili entle kuba wawunokwakha imbali yombhali kwaye ukhangele igunya labo kwizihloko ezithile. Ukuphinda phinda ishumi leminyaka lokubhala malunga nentengiso, umzekelo, akunakwenzeka.
Ngelixa abantu abaninzi bekholelwa ukuba uGoogle ubulele ubuqambi, ndiyakholelwa ukuba babulala kuphela umaki. Ndicinga ukuba kukho ithuba elihle lokuba uGoogle avele aguqule ubuchwephesha bokuchonga ababhali ngaphandle kophawu.
Ixesha lokufumana umvuzo
Ukunyaniseka, ndikonwabele ukuphela kweshishini lokunxibelelana nomva. Kwakuyixesha lokuhlawula-ukudlala apho iinkampani ezineepokotho ezinzulu zaqesha ii-arhente ze-SEO ezinezixhobo ezininzi zokuvelisa i-backlinks. Ngelixa sasisebenza nzima siphuhlisa iisayithi ezintle kunye nomxholo omangalisayo, sasijonga njengoko isikhundla sethu sihla ngokuhamba kwexesha kwaye siphulukene nenxalenye ebalulekileyo yezithuthi zethu. Kwakufuneka sigxile ngakumbi kwimidiya yoluntu kunye nokunyusa ukuze siveze igama.
Umxholo okwimigangatho ephantsi, ukuphawula nge-spamming, kunye namagama aphambili emeta azisekho iiQhinga le-SEO- kwaye ngesizathu esivakalayo. Njengokuba ii-algorithms zeinjini yokukhangela ziya zisiba nzima ngakumbi, kulula ukufumanisa (kunye nokukhula) kwezikim zonxibelelwano ngobuqhetseba.
Kunyaka ophelileyo, yethu ukugcwala kweinjini yokukhangela kwendalo kunyukile nge-115%! Ayizizo zonke ii-algorithms. Sakhe indawo ephendula kakhulu esebenza kakuhle kwizixhobo zefowuni nezeetafile. Siguqule indawo yethu yonke sayenza indawo ekhuselekileyo eneSitifiketi se-SSL. Kodwa sikwachitha ixesha sihlalutya idatha yokukhangela kunye nezihloko ezichongiweyo (ezinje) abaphulaphuli bethu abanomdla kuzo.
Ndiyaqhubeka ukuxelela abantu ukuba i-SEO ibikade iyingxaki yezibalo, kodwa ngoku ibuyiselwe kwingxaki yabantu. Ngelixa kukho izicwangciso ezithile ezisisiseko zokuqinisekisa ukuba indawo yakho inomdla kwiinjini yokukhangela, inyani kukuba umxholo omkhulu uhambelana kakuhle (ngaphandle kokuvimba iinjini zokukhangela). Umxholo omkhulu ufunyanwa kwaye kwabelwana ngawo ekuhlaleni, emva koko kukhankanyiwe kwaye kwaqhagamshelwa kwiindawo ezifanelekileyo. Kwaye ngumlingo we-backlink!
tags: Umva ongasemvaukuxhuma umvakukunikalinkearningamakhonkcoi-pagerank algorithm